FANDORANA TRANO NINIANA NATAO : Vola mitentina 9 tapitrisa Ariary sy môtô iray kila forehitra
Telo mianaka ankehitriny no tsy manan-kialofana ao amin’ny Kaominina Anivorano Avaratra, Distrikan’Antsiranana II, noho ny hetraketraky ny hafa. 8 février 2018
Trano hazo roa no nisy ninia nandoro ny zoma hifoha sabotsy lasa teo tokony ho tamin’ny 2 ora sy sasany ka rava tsy nisy entana azo noraisina tao amin’ireo trano, araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana.
Tena tamin’ny ora naharesy torimaso ny olona tokoa ny ora nanatanterahan’ireo olon-dratsy ny loza. Magazay fampirimana entana ny iray tamin’ireo trano. Araka ny fitantaran’ireo niharam-boina dia nisy nandraraka lasantsy tamin’ireo trano satria 10 minitra ihany raha ela dia rava tanteraka tsy nisy azo noraisina ny trano. Nanamafy ilay tompon-trano fa tena ankasomparan’ny sasany izao tranga izao ka tsy hipetra-potsiny izy ireo fa hametraka fitoriana.
Tafavoaka mialoha ny fotoana ny tompon-trano sy ny zanany, naratra kosa ilay raim-pianakaviana noho ny fanavotany ny zanany ka nilatsahan’ny hazo. Tsy nisy ny aina nafoy. Nivoaka nijery ny zava-niseho ny teo amin’ny manodidina ka na niezaka hifanome tanana hifehy ny afo aza trano efa rava sy levon’ny afo sisa no hitan’ny mpiara-monina. Araka ny fanambaràn’ireo niharam-boina dia vola mitentina 9 tapitrisa ariary sy môtô iray no kila forehitra nandritr’ity fahamaizana ity.
Nametraka fitoriana eny amin’ny polisy ao an-toerana ity tompon-trano niharan-doza ity ary efa eo am-pikarohana ny nahavanon-doza izy ireo amin’ izao fotoana.